Amazon ၏အယူခံလွှာ၊ ရောင်းသူအကောင့်ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ချက်အစီအစဉ်
ယခုကျွန်ုပ်တို့နှင့်တိုက်ရိုက်စကားပြောခန်းကိုစတင်ပါ။ သို့မဟုတ်သင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအွန်လိုင်းစုံစမ်းရေးပုံစံကိုဖြည့်ပါ။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်တစ်နာရီအတွင်းပြန်လာပါလိမ့်မည်။ ပြီးပြည့်စုံသောအမေဇုန်ဆိုင်းငံ့ခြင်းအယူခံဝင်စာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကြည့်ပါ
အဘယ်ကြောင့် Amazon ရောင်းချသူအကောင့်ကိုဆိုင်းငံ့ထားရသည်ကိုနားလည်ပါ။
အကောင့်ဆိုင်းငံ့ရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုသိခြင်းသည်အကောင့်ပြန်လည်စတင်ရန်ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ပြtheနာကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်အတွက်ကွင်းဆင်းကျွမ်းကျင်သူလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းသူအကောင့်အထူးကုများကသင်၏ဆိုင်းငံ့ခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေရန်နှင့်ပြီးပြည့်စုံစွာရေးသားရန်သင့်အားမည်သို့ကူညီမည်ကိုရှင်းပြလိမ့်မည် အမေဇုံအယူခံပေးစာ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်၍ သင်၏အယူခံကို ASAP ရယူပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီ၊ တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်ဖွင့်ပါသည်။
နောင်အနာဂတ်မှာဒီလိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုတားဆီးမလဲဆိုတာသေချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ သင်သည်မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ကိုမဆိုလုပ်ရမည်ဟုအမေဇုံမှမျှော်လင့်ပြီးသင်၏လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်ကိုသင်ပြီးမြောက်ကြောင်းပြသရန်တစ်ချိန်ကသူတို့သည်သင်၏ Amazon ရောင်းသူအကောင့်ကိုပြန်လည်ထည့်ပေးလိမ့်မည်။
သင်၏ Amazon ရောင်းချသူအကောင့်အားအကူအညီတောင်းရန်သင်လိုအပ်လျှင်သို့မဟုတ်အခြားတစ်ဖက်တွင်သင်၏ပြန်လည်နေရာချထားမှုအခွင့်အလမ်းများအကြောင်းသင်သိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ သင်၏အမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံဥာဏ်များအခမဲ့ရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဆွေးနွေးပါ။
သင်၏စာရင်းအားပိတ်ထားပါကနှင့်သင်၏အကောင့်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်သောမူဝါဒချိုးဖောက်မှုများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အယူခံဝင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်ရေးကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး နှင့်စကားပြောပါ။
သင်၏ဆိုင်းငံ့ထားသော Amazon အကောင့်ကို ၂၄ နာရီအတွင်းပြန်လည်ရယူပါ
သင်၏ Amazon ရောင်းချသူအကောင့်အားခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားရန်အချိန်ကြာမြင့်သော်လည်းအကောင့်ပြန်လည်ရရှိခြင်းသည်အချိန်ကုန်နိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဤအချိန်သည်ရောင်း ၀ ယ်မှုပြုသည့်အမှားအယွင်းများကြောင့် Amazon ၏မူဝါဒများတွင်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုမရှိခြင်း၊ နောက်ကွယ်မှပြdetectနာကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ဤအချိန်ကိုတိုးချဲ့ခြင်း အမေဇုံအကောင့်ရပ်ဆိုင်းမှုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြတ်ပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမေဇုန်ရပ်ဆိုင်းမှုအယူခံစာကိုရေးရန်မတတ်နိုင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပြproblemsနာများကိုမည်သူမဆိုထက် ပို၍ နားလည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြန်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုအမြန်ဆုံးအာမခံပါသည်။
Aplus ကို Global eCommerce သင်၏အယူခံ ၀ င်မှုလိုအပ်ချက်နှင့်ပြည့်စုံသောဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအတွက်တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ ပြproblemနာ၏ရှုပ်ထွေးမှုပေါ် မူတည်၍ အချိန် ၂၄ နာရီမှ ၇၂ နာရီအထိရှိသည်။
ကျွန်ုပ်၏ Amazon အကောင့်ကိုမည်သို့အသုံးမပြုဘဲနေမည်နည်း။
တစ်စုံတစ် ဦး ကိုငှားရမ်းခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော် Amazon မှပေးပို့သောအသိပေးချက်ကိုသင်ဂရုပြုပြီး Plan of Action တစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားလျောက်ပတ်သောအယူခံဝင်၏အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်။
အယူခံဝင်ရန်အနည်းဆုံးအချိန်သည် ၂၄ နာရီဖြစ်သည်။ ဆိုင်းငံ့ထားသည့် Amazon အကောင့်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်နှင့်ရောင်းသူမှတောင်းဆိုသော ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများအရဤအချိန်ကာလသည် ၃ ရက်မှ ၃ ရက်အထိတိုးနိုင်သည်။
Amazon ရောင်းချသူအကောင့်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့မှာအမျိုးမျိုးသော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် package များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြံပေးခြင်း၊ Amazing အယူခံဝင်စာကိုတင်ပြခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ သင်ရွေးချယ်သောအထုပ်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်။
သင်သည် Amazon ရောင်းချသူအားဆိုင်းငံ့သည့်အမှုများတွင်အလုပ်လုပ်ပြီးပြီလော။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်နွှယ်သောကွဲပြားခြားနားသောအမှုပေါင်းများစွာဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည် အမေဇုံအကောင့်ရပ်ဆိုင်းခြင်း။ ဒါ့အပြင်ကျနော်တို့ဒီလယ်ကွင်းမှစစ်ပြန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည်။
အသနားခံလွှာကို၎င်း၏ရည်မှန်းချက်ပြည့်မှီသည့်တိုင်အောင်ပြန်လည်ကိုင်တွယ်သည်။ သင့်အားတစ်ကြိမ်သာငွေပေးပြီးသောအခါ၊ ကိစ္စရပ်များအားလုံးဖြေရှင်းပြီးသည်အထိကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းစဉ်၏ခြေလှမ်းတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး အနေဖြင့်ဆိုင်းငံ့ထားသည့် Amazon ရောင်းချသူအကောင့်အားပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အယူခံ ၀ င်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပေးပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အမေဇုန်ကုန်ဆုံးချိန်မှအချက်အလက်များကိုထိန်းချုပ်။ မရနိုင်ပါ။ အကောင့်ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်မှာ ၁၀၀% အာမခံချက်မရှိပါ။ သို့သျောလညျးကြှနျုပျတို့သညျယခုအထိ 100% ကျော်၏အောင်မြင်မှုနှုန်းကိုထိန်းသိမ်းထားပါပြီ။
Amazon အယူခံ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အောင်မြင်မှုနှုန်းမှာအဘယ်နည်း။
ကျေးဇူးတင်စရာ၊ ယခုအထိကျွန်ုပ်တို့သည် ၉၈% နှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောသို့မဟုတ်အောင်မြင်သောအောင်မြင်မှုနှုန်းကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည်။ ဖောက်သည်များ၏ကျေနပ်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ၉၀% ဖောက်သည်ထိန်းသိမ်းမှုနှုန်းလည်းရှိသည်။
Dejah Stewart က
01: 11 13 ဇွန် 21
ကျွန်ုပ်၏အမေဇုန်ရောင်းသူအကောင့်အားပိတ်ထားသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် Deactivation ကိုအယူခံဝင်ရန်အရေးယူမည့်အစီအစဉ်ရေးရန်ကူညီရန် A Plus Global Amazon သို့ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။... ကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ပြီးကျွန်ုပ်မရပ်တန့်မီကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသောပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အလွန်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံ၊ သူတို့သည်တုံ့ပြန်မှု ရှိ၍ ကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုပြန်လည်ရှင်သန်လာစေရန်ကျွန်ုပ်အားလျှောက်လှမ်းခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၂ ရက်ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကျိန်းသေအလုပ်လုပ်!ဆက်ဖတ်ရန်
01: 00 13 ဇွန် 21
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အယူခံဝင်ပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်သည် POA ၄-၅ သို့ပို့ပေးပါကံမကောင်းသည်။ ငါအကောင့်ပြန်မရရှိနိုင်ကတည်းကငါစာသားအမေဇုံအကောင့်အသစ်တခုစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ မင်းကိုစိတ်ထဲငါနေဆဲရန်ပုံငွေများကိုသော့ခတ်ရှိသည်... အမေဇုံနှင့်အတူတက်သူတို့သူတို့သည်ငါ၏အအယူခံမဆိုတုံ့ပြန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ("ဒီပြaboutနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်အီးမေးလ်များကိုကျွန်ုပ်တို့တုံ့ပြန်မည်မဟုတ်ပါ" ဟုအီးမေးလ်ဖြင့်) ။ ဤကုမ္ပဏီကိုအသုံးပြုသောတစ်စုံတစ် ဦး ထံမှထောက်ခံချက်ရပြီးလျှင်သူတို့နှင့်အတူသွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါစွန့်စားလိုက်ပြီး၊ ငါသူတို့ကိုငါပေးမယ်၊ ငါ့အကောင့်ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးငါ့ရန်ပုံငွေလည်းပြန်ရမယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ငါသူတို့ကိုပေးပြီးပိုက်ဆံဆုံးရှုံးပြီးငွေနဲ့ငါ့အကောင့်လည်းဆုံးရှုံးသွားမယ်လို့ငါပြောခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုပြန်လည်ရယူရန်ကုမ္ပဏီအားကူညီမည် နောက်တစ်နေ့တွင် "သင်၏အမေဇုံအကောင့်ကိုပြန်လည်အသက်ဝင်လာပြီ" ဟုအီးမေးလ်တစ်စောင်ရလိုက်သည်။ အလုပ်ကောင်းတစ်ခု။ ကျွန်ုပ်သည် Aplus Global သို့အကြံပြုသည်။ သင်၏အကောင့်ကိုပြန်လည်သို့မဟုတ်ပြန်လည်အသက်သွင်းလိုပါကထပ်တူအမှားမလုပ်ပါနှင့်။ လုပ်ခဲ့တယ် သင့်အတွက် POA ရေးရန်ပညာရှင်တစ်ယောက်ရယူပါ။ဆက်ဖတ်ရန်
09:27 29 မေလ 21
သူတို့လုပ်တာကောင်းတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ Amazon အရောင်းဆိုင်အကောင့်ပြန်လည်အသက်ဝင်လာစေရန်ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်အချိန်အနည်းငယ်ကြာသော်လည်း၎င်းတို့သည်အကောင့်တစ်ခုမှအရှုံးမပေးခဲ့ပါ။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုအသနားခံစာတွေရေးတယ်... ပြန်လည်အသက်သွင်း ကျွန်တော်ပြန်လည်အသက်ပြန်ရှင်လာသည်မှာ ၂ လခွဲခန့်ကြာခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်၌ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသောသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိပြီးရက်အနည်းငယ်အတွင်းသူ၏အကောင့်ကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။ အထူးအကြံပြုလိုတယ်!ဆက်ဖတ်ရန်
08:26 05 မေလ 21
သူတို့နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာအရမ်းပျော်တယ် အလွန်လျင်မြန်စွာဝန်ဆောင်မှုနှင့်၎င်းတို့၏အယူခံဝင်စာကိုအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ဒီလူတွေ Amazon ကဘာလိုချင်လဲဆိုတာသိတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!
11:07 03 မေလ 21
ငါသည်ဤကုမ္ပဏီနှင့်အတူ 100 ကျော်အကောင့်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီးသူတို့အများစုကပြန်လည်ထားရှိ။ သူတို့ကအရမ်းကောင်းသောအယူခံစာဝန်ဆောင်မှုဝန်ဆောင်မှုတိုတောင်းသော၌ရှိကြ၏။ ငါသူတို့နှင့်အတူဆက်လက်လုပ်ကိုင်ပါလိမ့်မယ်။
06:17 03 မေလ 21
ဟယ်လို! ငါပြောချင်တာကငါ့အကောင့်ကိုပြန်ဖွင့်ထားတယ်။ သင့်ရဲ့အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါမင်းကိုမှတ်မိမှာပါ
19:24 17 21ပြီ XNUMX
စီးပွားရေးအတွက်အကောင်းဆုံး။ သူတို့ရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုငှားပြီးငါ့အကောင့်အတွက်သူတို့ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကြည့်ပြီးတဲ့နောက်။ ငါသူတို့မဖြေရှင်းနိုင်ဘာမှမရှိဘူးယုံကြည်ပါတယ်ပြောရမယ်။ ပြproblemsနာရှိသူမည်သူ့ကိုမဆိုအကြံပေးပါ... ရောင်းသူအကောင့်။ လျင်မြန်စွာအရေးယူသူနှင့်အလွန်မြန်မြန်ရလဒ်များကို!ဆက်ဖတ်ရန်
EJ Odulio ပါ
23:34 09 21ပြီ XNUMX
Amazon ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်မည်သည့်အရာကိုရှာဖွေနေသည်ကိုသိရှိနိုင်ရန် Amazon ကုမ္ပဏီမှမည်သည့်အယူခံဝင်စာကိုမဆိုစာရေးရန်ဤကုမ္ပဏီကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုလိုပါသည်။ ငါသည်အခြားကုမ္ပဏီများအတွက်သုတေသနပြုလုပ်ပြီးသူတို့ငါ့ကိုစကားပြောရန်အချိန်လုပ်သောကြောင့်ဤကုမ္ပဏီကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်... ငါ့အကောင့်အကြောင်း။ ငါ့ကိုရန်ပုံငွေထုတ်ပေးဖို့နဲ့ငါ့အကောင့်ကိုကောင်းကောင်းဆိုင်းငံ့ထားဖို့ရက်ပေါင်း ၉၀ နဲ့ရက်ပေါင်းများစွာစောင့်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တကယ်ထင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်အယူခံဝင်သည့်စာကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်ပညာရှင်ပီသစွာရေးသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်၏အမှုအားပထမဆုံးအကြိမ်အယူခံဝင်လျှင်ပညာရှင်တစ်ယောက်ငှားရမ်းရန်ကျွန်ုပ်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ ဒီကုမ္ပဏီကကျွန်တော့်အကောင့်ကိုသူတို့အယူခံဝင်စာနဲ့အတူအယူခံဝင်တဲ့နေ့မှာပဲပြန်ဖွင့်လာအောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်။ ဘယ်ငါ့အမှုမှကိုယ်ပိုင်ခဲ့သည်။ အလွန်ကြီးစွာသောအလုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်ဆက်ဖတ်ရန်
05:02 07 မတ်လ 21
People @ APlus Global Ecommerce သည်အလွန်ကောင်းပြီးအထောက်အကူဖြစ်သည်။ အကောင့်အပြည့်အစုံကိုကြည့်ပြီးအပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်၍ သိသိသာသာထိုးထွင်းသိမြင်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့အဲဒါကိုခန့်မှန်းပါ... ငါသည်လည်းငါ့အရောင်းတိုးတက်ခဲ့သည်ဆက်ဖတ်ရန်
04:58 07 မတ်လ 21
APlus Global Ecommerce သည် Amazon အယူခံ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည်။ ပိတ်ပင်မှု ၇၂ နာရီအတွင်းကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုပြန်လည်ထားရှိခဲ့ပါသည်။
Malak Abdullah Khan က
15:58 06 မတ်လ 21
APlus Global Ecommerce ကို ၂ နာရီအတွင်းပို့ပေးပြီး Amazon မှချက်ချင်းပြန်လည်အပ်နှံခဲ့သည်။ လုံးဝအကောင်းဆုံး။ တိုင်းတစ်ပြားထိုက်သည်။ သင်အကြံပေးလိုသည်မှာကျွန်ုပ်၏အကြံပေးချက်မှာစျေးနှုန်းကိုမကြည့်ပါနှင့်... အကောင်းဆုံး ဆက်သွယ်ရေးကို ၀ ယ်ယူလျှင်မြန်ပြီး ၂ နာရီအတွင်းကျွန်ုပ်၌စာရွက်စာတမ်းရှိခဲ့ပြီး ၂၄ နာရီထက်နည်းသည့်အချိန်တွင်ငွေစာရင်းကိုထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့သည်။ ငါအကောင့်ကို2လကျော်ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်။ ငါအရမ်းအကြံပြုလိုတယ်ဆက်ဖတ်ရန်
18:21 16 ဖေဖော်ဝါရီ 21
၂၄ နာရီအတွင်းကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အားမည်သူ့ကိုမျှမထောက်ခံပါ၊ လူများကိုငွေပိုပေးရခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်နှင့်အယူခံ ၀ င်ရာတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်